Tetikasa: Wild Birds Unlimited - Mahafinaritra miaraka amin'ny Google Maps | Martech Zone
Tetikasa: Wild Birds Unlimited - Fialam-boly miaraka amin'ny Google Maps
Alahady, Jolay 29, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny olona tsara fanahy amin'ny Wild Birds Tsy voafetra dia nangataka ny fanampiany aho hanova ny sarintanin'ny fivarotany ho Google. Raha manontany tena ianao hoe nahoana aho no nangina tato ho ato, tsy hoe satria niblaogy aho – fa satria tena tsy miraharaha an'io tetikasa io aho!
Ary koa, manomboka asa manontolo andro vaovao aho ao anatin'ny herinandro ary te-hahazo antoka fa afaka manatitra tsara alohan'ny fe-potoana! Noho izany, nangataka fanampiana aho… Nanao asa mahafinaritra i Stephen ary ny namako iray hafa, Todd, dia hanampy antsika hanatsara sy hanadio ny kaody rehetra alohan'ny fanaterana.
Raha fintinina, ny fampiharana dia naorina amin'ny PHP, MySQL, ary Ajax ary fitaovana ho an'ny mpitsidika Wild Birds hikaroka toerana akaiky azy ireo. Ny angona dia voatahiry ao amin'ny rakitra KML mba hanatsara ny fampandehanana sy hanararaotra ireo endri-javatra farany sy lehibe indrindra amin'ny Google Map API. Misy fahasarotana fanampiny ihany koa satria ny angon-drakitra dia voatazona amin'ny toerana mihoatra ny iray saingy fanamby iray mahafinaritra izany.
Ity misy sarin'ny fizarana administratif (miasa tanteraka!) ahafahan'ny Administrator miditra sy manavao ny toerana misy ny fivarotany amin'ny sari-tany:
Mbola kely ny asa tokony hatao, fa ny fandrosoana dia tena tsara hatramin'izao. Mila mampiditra angon-drakitra GeoIP isika mba haminavina ny toeran'ny mpitsidika, ary koa manome torolàlana mankany amin'ny toerana rehetra avy amin'ny adiresin'ny mpitsidika. Zavatra mahafinaritra! Mahareta fa afaka herinandro roa dia hiverina amin'ny ara-dalàna isika.
Fametahana bilaogy: tontolon'ny bilaogy Alpesh Nakars
Jul 30, 2007 amin'ny 7: 02 AM
Tsara, Doug! Vao avy nampihatra zavatra mitovy amin'izany izahay fanentanana izay hivoaka amin'ity herinandro ity. Tena mitovy amin'ny fomba fiasa, afa-tsy ny mamela ny fandefasana ny rakitra ho an'ireo mpivarotra ary nanampy an'i Canada ihany koa. Zavatra mahafinaritra!
Oh, ary arahabaina noho ny asa vaovao. Miandrandra ny fandrenesana bebe kokoa momba izany! / Jim
Jolay 30, 2007 amin'ny 8:20 PM
Toa mandeha tsara ilay tetikasa ry Doug. Azoko antoka fa mankafy ny lafiny famoronana amin'ny fiatrehana tetikasa tahaka ity ianao.
Ny fanomezana soso-kevitra hanatsara ny tanjon'ny fandraharahana ankapoben'ny mpanjifanao dia toa hevi-dehibe ho anao – asa tsara!